Velirano nataon'i Andry Rajoelina tao Tanambe
Matoa aho tonga eto Tanambe dia satria tiako ianareo rehetra.
Hitsinjo anareo aho ka omeko tany hovolena ny tanora. Amboariko ny CEG sy ny EPP. Amboariko ny tohodrano ao Tsimanakana mba hanondraka ireo tanimbary.
Ary tsy aveloko ho alain'olona ny tany fivelomanareo. Foiko ho an'i Madagasikara ny tenako mba hanasoavako anareo.